Jiri Google Docs na WordPress? | Martech Zone
IHE: Atụmatụ a anaghịzi akwado ya Google Docs mana enwere Google Doc ka WordPress Add-na dị.
Nụla m mgbe m na-ebe ákwá banyere WordPress panel, ọ mara mma nke jọgburu onwe ya maka onye ọhụrụ na-ede blọgụ ma chọọ ihu ihu. Ọ bụ mkpesa a na-enwetakarị mgbe m na-enweta ndị mmadụ n'elu ikpo okwu. Fọdụ ndị asọmpi na-ege ntị… SixApart ka malitere VOX nwere ezigbo njirimara ọrụ. WordPress dị ka ọ na-enwetakwa ozi ahụ, ya na KnowNow na mmekọrịta ọhụrụ nke WordPress.
Otu n'ime ndenye ikpeazụ m kwuru ka m tufuo ozi m niile nkeji ole na ole tupu m biputere ya. Otu n'ime teknụzụ m, Dale McCrory, na-arụ ọrụ jụrụ m ihe kpatara na anaghị m eji ya eme ihe Google Docs ka biputere m blog. Huh? N'ezie? Ee! N'ezie!
Site na Google Docs, inwere ike itinye akwukwo gi na blog gi! Nke a bụ otu:
1. Pịa “Kwusaanụ” na “Biputere Blog”:
2. Wee họrọ blog gị ụdị si interface. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịnabata saịtị nke aka gị WordPress, lee otu ị ga - esi hazi ya:
Akwụkwọ Google nwere ọrụ 'nchekwa onwe' ka ị ghara ịla ọrụ gị n'iyi! Mara mma!
Tags: google docsgoogle +biputere ka wordpressWordPress
Nov 23, 2006 na 4:56 AM
Aga m agbalịrị ịnwale nke a. Naanị m na-anwale Google Docs n'izu a gara aga, n'ihi ya, m ka na-ahụ ụzọ m site na ihe ọ nwere ike inye.
Ejirila m ngwa mgbakwunye GSpace maka Firefox ka m nwee ike iji akaụntụ GMail maka nchekwa faịlụ dị n'ịntanetị. Have nwalere ndọtị arụmọrụ maka Firefox? Nke ahụ bụ ezigbo ụzọ dị mma nke ịdebanye na blọọgụ ọ bụla, ma gbochie mkpa ịbanye na mpaghara nchịkwa gị, pịa ebe ị ga-ede post, wdg.
Ọtụtụ na-agwụ ike. Na Tiger nchịkwa plugin na-enye ọtụtụ funkier na bara uru interface maka WP admin karịa ndabara, nke bụ hoo haa na-agwụ ike na ewepụghị. x
Nov 23, 2006 na 6:47 PM
Amalitere m iji Docs ma nwee mmasị na ya. M ka nwere oge siri ike na-ejighi iji WordPress biputere ọ bụ… Ọ na-amasị m itinye eserese, mkpado, trackbacks, wdg.
Enwekwara m ndọtị ịrụ ọrụ na enwere m otu nsogbu ahụ, enweghị m ike ịme ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ. Nchịkwa Tiger bụ ihe m ji eme ihe nwa oge na ọ masịrị m.
Achọrọ m ka m were ọnwa ole ma ole ma wughachi Admin maka WordPress. Echere m na SixApart dị na ihe nwere Vox, ha emeela ka nlekọta nchịkwa dị mfe. WordPress dị na cahoots nwere 'KnowHow'… yabụ anyị ga - ahụ ma ọ bụrụ na nke ahụ na - eduga na nchịkwa kacha mma.
Amaghị m ihe gbasara arụmọrụ. Ejiri m ya otu oge, ọ mepụtara ụfọdụ ihe ọkpụkpọ usoro dị iche iche ma nwee ọfụma na CSS. Ha agbanweela aha ugbu a n'agbanyeghị, ScribeFire Echere m, ụlọ ọrụ ahụ dị ka ọ na-efu nnukwu oge.
Nke a anaghị arụ ọrụ maka m. Mgbe m pịa Ule ọ na-ekwu "Anyị ezutela njehie, nke anyị ga-enyocha ozugbo. Ndo maka mgbaka ahụ."
Ọ dị ka njehie n'akụkụ ha, E. Jide n'aka na ị nwere adreesị ziri ezi na faịlụ xmlrpc.php gị… ọzọ karịa nke ahụ, ọ nwere ike bụrụ nsogbu ọrụaka na akụkụ Google.
Iji nwalee ebe xmlrpc.php gị dị, tinye ya na ihe nchọgharị gị:
Ga-enweta njehie na-ekwupụta: “Ihe nkesa XML-RPC na-anabata naanị arịrịọ POST.” Nke ahụ pụtara na ọ dịla njikere! Nke a bụ otu faịlụ ahụ na-anabata trackbacks nakwa.
Ee, ahuru m na ibe ahu oma. Ọ nwetara ya maka MovableTypeAPI na ihe niile. Echetara m ịnwale nke a ọnwa ole na ole gara aga na posts ga-agabiga oge ụfọdụ mana ọ ga-eweghachi njehie mgbe niile. N'ihi ya, ọ gara n'ihu na-ekwu "E bipụtaghị akwụkwọ a na blọọgụ gị" wee weghachite njehie ọbụlagodi na enwere ike bipụta blog (mgbe ụfọdụ). : - /
Feb 7, 2007 na 1:24 PM
M na-enwe otu “Anyị na-okosobode error” njehie ozi show elu. Fọdụ ndị kwalitela ma ọ bụ tinye WP n'ọrụ ma ọ rụọ ọrụ. Ruo ugbu a, enweghị m, n'agbanyeghị ihe m na-agbalị.
Fọdụ ndị nwere ihu ọma:
Feb 24, 2007 na 7:17 PM
Enwere m njehie mgbe ọ bụla m gbalịrị ịtọlite ​​mbipụta na wordpress.
M na-elele ihe niile okpukpu abụọ mana ọ naghị arụ ọrụ!
Enwetara m ọnọdụ wierd ebe m nwere akaụntụ gmail abụọ na google docs enyere ma otu akaụntụ nwere ikike 'post to blog' ma nke ọzọ enweghị m ike ịchọpụta ebe m ga-esi mee ya. Ọ na-efu efu.
Timoti na Mallory
Akwa post, ma ọ dị nwute na google anaghị akwado ọrụ a ka ọ bụrụ na post gị gafeela. Biko lee imelite ma ọ bụ wepụ post gị ka ị ghara iwepụ oge onye ọ bụla na-achọ azịza kwesịrị ekwesị.
@ twitter-531767294: disqus Nnukwu njide! Emelitere m post ahụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ime mpụga ụdị biputere gị WordPress saịtị, M hụrụ n'anya n'ezie ndọda Forms.
Nov 1, 2014 na 8:39 AM
Anyị mepụtara Google Docs Addon na nso nso a na-enye ọrụ a http://plugmatter.com/publish-to-wordpress
Ọ na - enyere ndị Docs aka ibipụta ya ozugbo na WP blọgụ nwere usoro yana onyonyo zuru oke. Ọ ga-amasị gị ịnweta nzaghachi gị na ya.